Yaya Toure oo ka faa’iideysanaya dhibaatada Gundogan – Gool FM
Yaya Toure oo ka faa’iideysanaya dhibaatada Gundogan
Byare December 16, 2016
(Manchester) 16 Dis 2016. Xikmad carabi ah ayaa oraneysa: “Musiibatu qoomin cinda qoomin fawaa’idu”, masiibadii qoom ku habsata kuwa kale ayay faa’iido u tahay. Haddaba dhaawicii darnaa ee soo gaaray Ilkay Gundogan ayaa waxa ay faa’iido u noqotay Yaya Toure.
Tababare Pep Guardiola ayaa xiddiga reer Ivory Coast ka saaray shaxdiisa Champions League, laakiin iminka waxaa lagu wadaa inuu markale dib ugu soo celiyo maadaama lagu wado in wiilka reer Germany uu garoomada ka maqnaado inta ka harsan kal ciyaareedkan.
Gundogan ayaa dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka kulankii dhawaa ay Man City ka adkaatay Watford, tijaabooyin la marsiiyay ayaa sheegin war lagu farxo inkastoo lagu wado in tijaabooyin dheeri ah loo celiyo.
Sidaa darteed, Yaya Toure ayaa lagu wadaa inuu dhaxlo booskiisa maadaama la filayo in qaliin la marsiyo 26-jirka xagaagan uun ku soo biiray kooxda.
TOOS u daawo: Genoa vs Fiorentina - LIVE + Shaxda sugan (Ciyaar roob horay ugu joogsatey)
Koox ka dhisan Shiinaha oo u soo bandhigeysa Lionel Messi dalab ay adag tahay in la diido